Dumarka wallaca ah "waxay u baahan yihiin daryeel" - BBC News Somali
Dumarka wallaca ah "waxay u baahan yihiin daryeel"
Image caption Haween mada ah ayaa ka mid ah kuwa sida daran u xanuunsada xilliga wallaca
Dumarka aadka ugu xanuunsada wallaca, waa in la siiyo daryeel heer sare ah oo daaweyn ah, sida ay sheegeen hay'ad iyo khubaro caafimaad.
Dumar badan oo uurka ku xanuunsaday ayaa loo diiday daryeel "waxtar leh oo bad qab ah", sida ay sheegeen xirfadlayaasha.
Shir caalami ah oo uu hoggaaminayo Iskuulka Plymouth ee Britain ayaa lagu diyaarinayaa cilmi baariddii ugu dambeysay iyo daawo waxtar leh.
In bulshada laga wacyigeliyo xaaladda "halista ah" ayay dalalka qaar sare u qaadeen.
Waxaa la sheegay in mid ka mid ah, 200 oo dumar ahba, ay si aad u daran ugu xanuunsato bilaha ugu horeeya ee uurka.
Waxaa xanuunka ka dhasha lalabo iyo matag dhallin kara in ay nafaqa la'aan ku dhacdo oo cisbitaal la seexiyo.
Sida loo daaweeyo finanka wejiga?
Shirka oo laba maalmood soconaya oo ay marti gelineyso hay'ad taageerta dumarka wallaca ah iyo laanta latalinta dumarka uurka leh ee Britain, ayaa lagu sheegay in boqolkiiba 53, dumarka xanuunsan ay dhibaato kala kulmaan helidda daawada ay u baahan yihiin, sida lagu xusay cilmi baarid dhowaan la sameeyay.
Catherine Nelson-Piercy, oo dhaqtar ah ayaa sheegtay: "In la ballaariyo wacyigelinta ku saabsan daawada diyaarka ah iyo in la baaro xaaladda dhabta ah, ay sababi karaan in xaaladda dumarka wallaca ah la wanaajiyo."
Dumar badan oo daafaha caalamka ku nool ayaa aad u xanuunsada marka ay uur qaadaan.
Sidoo kale waxaa la ogaaday in seddax meelood-laba meel oo ka mid ah dumarka ay mararka qaar helaan akhbaarta saxda ah ee caafimaadkooda ayna helaan daawo wanaagsan.
Xanuun saameeyay Mid ka mid ah lixdii qof ee UK ku nool
Maqal Dhageyso: Saameynta cudurka Zika maxay tahay?
Maqal Dr Edna Adan ayaan ku eegeynaa barnaamijka 100-ka dumarka ee BBC